အာဖဂန်နစ္စတန် - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
မျိုးဆက်သစ်တိုက်လေယာဉ်များ - Zubair Massoud သည်အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိတာလီဘန်တို့၏စည်းမျဉ်းကိုရင်ဆိုင်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2021 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2, 2021 Mandeep Singh က	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်နစ္စတန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်း Zubair Massoud သည်အာဖဂန်မိသားစု၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည်။ သူ၏မိသားစုသည်အာဖဂန်နစ်စတန်နိုင်ငံရေးတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ had မှပါဝင်ခဲ့ပြီးတာလီဘန်များအနေဖြင့်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်နိုင်ရေးကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်
Zubair ၏အဘိုး Burhanuddin Rabbani သည်သြဇာအရှိဆုံးအာဖဂန်ခေါင်းဆောင်များအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ရဗ်ဗန်နီသည်အာဖဂန်နစ္စတန်သမ္မတဟောင်းဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တာလီဘန်တို့ကသတ်သေသည့်ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လုပ်ကြံခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သူ၏ ဦး လေး Ahmad Shah Massoud သည်အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိဆိုဗီယက်သိမ်းပိုက်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်ခဲ့သည် 1979 သို့သော် ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်အယ်လ်ကေးဒါးသတင်းထောက်များအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောအယ်လ်ကေးဒါးအဖွဲ့မှသူသေဆုံးခဲ့သည်။
Side Hustle - သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုငွေသို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 ဇန်နဝါရီလ 30, 2021 Robert Moment	မှတ်ချက် Leave
အကယ်၍ ဤအရာသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ကြားနာခြင်းဖြစ်သည် ဘေးထွက် Hustleကျွန်တော့်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါရစေ - ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်သင်ဟာ "ဘက်မှာ" လုပ်တဲ့အရာဟာမင်းရဲ့ ၀ င်ငွေရဲ့အဓိကဝင်ငွေအပြင်အပိုပိုက်ဆံတွေရစေပါတယ်။ သင်၏ဘေးချင်းယှဉ်။ ရရှိသော ၀ င်ငွေသည်သင်စိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီခန့်စစ်တမ်းများပြီးဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေအစီအစဉ်များကိုသုံးခြင်းပါဝင်နိုင်သည်။ နှင့်တနင်္ဂနွေ, 1 မှ2နာရီတစ်ပါတ်ဖြုန်း။ ဘေးတိုက် Hustles တစ်ရာရာမှအနည်းငယ်ထောင်ပေါင်းများစွာမှတစ်လဘယ်နေရာမှာမဆိုယူဆောင်နိုင်ပါတယ်!
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်နှင့် Freelancers များအတွက်ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအချက်များ
ဒီဇင်ဘာလတွင် 30, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 29, 2020 မော်နီကာလီ	မှတ်ချက် Leave
မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်ချိုသောအစားအစာများကိုစားခြင်း၊ မျက်နှာမျက်နှာဖုံးများသို့သော်၎င်းသည်သင့်ကိုအာရုံစိုက်ရန်၊ စွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုလုံလောက်သောအချိန်ဖယ်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်သောအလုပ်ကိုရပ်တန့်စေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုမရှိသောဖောက်သည်များနှင့်နိမ့်သောနှုန်းထားများဖြင့်အဆုံးသတ်သောအလွတ်သမားများအတွက်အများအားဖြင့်အရေးကြီးသည်။
CPJ - ဂျာနယ်လစ်များအတွက်အန္တရာယ်အများဆုံးနိုင်ငံ Mexico
ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 25, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
လက်ရှိတွင်မက္ကဆီကိုသည်စာနယ်ဇင်းသမားများအတွက်ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည်။ ဒါကအရသိရသည် အစီရင်ခံစာသစ် ဂျာနယ်လစ်များကာကွယ်ရေးကော်မတီ (CPJ) မှထုတ်ဝေသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိသတင်းထောက်များရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသောခြိုးခြံခြွေတာမှုကိုထင်ရှားစေသည် ဒီနှစ်မှာတော့မက္ကဆီကိုသတင်းထောက်အနည်းဆုံး ၅ ယောက်အသတ်ခံခဲ့ရတယ်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်အစိုးရကမူအာဖဂန်နစ္စတန်နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု၏ကျန်ခြေလှမ်းများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် တာလီဘန် တိုင်းပြည်အတွက်ကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Hamdullah Mohib ကပြောကြားရာတွင်၎င်းတို့သည်တိုင်းပြည်တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျစွာစိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းနှင့်တာလီဘန်များသည်တိုင်းပြည်အတွင်းမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလွတ်လပ်စွာရွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - ကဘူးလ်မှပေါက်ကွဲမှုကြောင့်လူနှစ် ဦး သေဆုံးပြီး၊
ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 13, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ကဘူးလ်ရဲအရာရှိများက လူနှစ် ဦး သေဆုံးပြီး၊ Parwan ဟိုတယ်15ရိယာ၏ XNUMX လုံခြုံရေးခရိုင်ထဲမှာသံလိုက်မိုင်းပေါက်ကွဲသောအခါ။ ကဘူးလ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှအတည်ပြုချက်အရရဲတံခွန်ကိုယနေ့နံနက်တွင်အမည်မသိသေနတ်သမားများကသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 5, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦး သိန်းစိန် Trump ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် ဆိုမာလီယာကနေသူ့တပ်တွေဆုတ်ခွာ။ သူသည်ယခင်ကအီရတ်နှင့်အာဖဂန်နစ္စတန်မှအမေရိကန်စစ်တပ်များရုပ်သိမ်းရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်အရတပ်ဖွဲ့အများစုမှာတပ်စွဲထားခြင်းဖြစ်သည် ဆိုမာလီယာ ၂၀၂၁ အစတွင်နိုင်ငံမှထွက်ခွာရန်စီစဉ်ထားသည်။
နိုဝင်ဘာလ 30, 2020 နိုဝင်ဘာလ 30, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
Dow နှင့် Standard & Poor's 500 အညွှန်းကိန်းများဖြစ်သည် ၁၉၂၈ ခုနှစ်မှစ၍ နို ၀ င်ဘာလတွင်၎င်းတို့၏အများဆုံးရာခိုင်နှုန်းရရှိမှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်မျှော်လင့်ထားသည်။ Dow Jones Market Data Group မှအချက်အလက်များအရညွှန်းကိန်းနှစ်ခုသည် ၁၂.၈၆% နှင့် ၁၁.၂၇% အသီးသီးမြင့်တက်ခဲ့သည်။ Nasdaq Composite အညွှန်းကိန်းသည် ၁၁.၈၆% မြင့်တက်မည်ဟုခန့်မှန်းထားပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှစ၍ အကောင်းဆုံးနိုဝင်ဘာဖြစ်သည်။
အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ B-52 ဗုံးကြဲလေယာဉ်များကို US ထပ်မံစေလွှတ်သည်
နိုဝင်ဘာလ 22, 2020 နိုဝင်ဘာလ 22, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်ဗဟိုဌာနချုပ်က၎င်းကိုဖြန့်ချိမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းရှိ B-52 တိုက်လေယာဉ်များ ၎င်း၏လျင်မြန်သောတုန့်ပြန်နိုင်စွမ်းတိုးမြှင့်ဖို့။ အီရတ်နှင့်အာဖဂန်နစ်စတန်တွင်အမေရိကန်၏စစ်အင်အားတိုးချဲ့မှုအားကြေငြာပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်လေတပ် ဦး စီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Greg Guillot က B-52 ဗုံးကြဲလေယာဉ်များသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတိုက်ခိုက်မှုများကိုနှိမ်နင်းနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - သေဆုံးသူ ၁၀ ဦး အထိရှိရာဒဏ်ရာရသူများ
နိုဝင်ဘာလ 22, 2020 နိုဝင်ဘာလ 22, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
စနေနေ့တိုက်ခိုက်မှု၏သားကောင်အရေအတွက် ကဘူးလ်တွင် ၁၀ ဦး သေဆုံးပြီး ၅၁ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်အာဖဂန်ဒုသမ္မတကယနေ့ပြုလုပ်သောအကဲဖြတ်မှုအသစ်အရတရားခံများစာရင်းသွင်းရန်ကတိပေးခဲ့သည်။ ယခင်ချိန်ခွင်လျှာကရှစ်ယောက်သေဆုံးပြီး ၃၁ ဦး ဒဏ်ရာမရမီညွှန်ပြခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mike Pompeo ကတာလီဘန်ခေါင်းဆောင်များကိုအာဖဂန်အစိုးရနှင့်အမြဲတမ်းအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်အကြမ်းဖက်မှုလျှော့ချရန်သဘောတူညီမှုရရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo သည်ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာတွင်တာလီဘန်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်.
အာဖဂန်နစ်စတန် - ဒုံးကျည်သည်ကဘူးလ်ရှိအီရန်သံရုံးကိုရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်
အာဖဂန်ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနကပြောကြားရာတွင်တိုက်ခိုက်မှုတွင်အနည်းဆုံးလူရှစ် ဦး သေဆုံးပြီးဒါဇင်ခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ စနေနေ့၊ နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်၊ စနေနေ့မနက်ခင်းတွင်၊ ကဘူးလ်ရှိအစိမ်းရောင်ဇုန်ရှိအဆောက်အအုံများတွင်သံရုံးများနှင့်အစိုးရရုံးများတည်ရှိရာဒုံးကျည်များစွာပစ်ခတ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါတပ်မှူး -In- ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ် သြစတြေးလျကာကွယ်ရေးတပ်၊ Angus Campbell အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိသြစတြေးလျစစ်သားများ၏အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကမ့်ဘဲလ်ကသြစတြေးလျစစ်သားတွေဟာတရားမ ၀ င်အကျဉ်းသား ၃၉ ယောက်ကိုတရားမ ၀ င်သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ် အာဖဂန်နစ္စတန်စစ်ပွဲ.
အာဖဂန်နစ္စတန် - ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်သားနှစ် ဦး သေဆုံး
နိုဝင်ဘာလ 14, 2020 နိုဝင်ဘာလ 14, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
[bsa_pro_ad_space id = 4] ကားဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ် ဦး သေဆုံးပြီး ၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် ကဘူးလ် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာ သတင်းများအရပေါက်ကွဲမှုသည်တပ်စခန်းအားဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ မည်သည့်အဖွဲ့ကမျှတိုက်ခိုက်မှုအတွက်တာ ၀ န်ယူကြောင်းပြောဆိုခြင်းမရှိပါ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 12, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 3, 2020 Robert Moment	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအလုပ်တစ်ခုရှာရန်သင်စိတ်ကူးဖူးသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မည်။ စိန်ခေါ်မှုများအကြောင်းပြောဆို, ဟုတ်သလော ကောင်းပြီ၊ သင်ဆင်း။ သင်၏အခွင့်အလမ်းများကြမ်းပြင်သို့ကျဆင်းသွားသည်ကိုမစဉ်းစားမီသင်၏အချိန်အများစုကိုရယူနိုင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သည့်အရာနှင့်နောက်လာမည့်အလုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုမည်သို့ချနိုင်မည်ကိုကြည့်ကြပါစို့။
စဉ်းစားရမည့်အချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာသင်သည်အခြားသူများအားသင်ကိုယ်တိုင်မည်သို့တင်ပြသည်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မကြာသေးမီကအကဲဖြတ်ပြီလော ဘာကြောင့်သင့်အားအလုပ်ရှင်လုပ်မည့်သူများအတွက်အဖိုးတန်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်စေသနည်း။ လူစည်ကားတဲ့ဈေးမှာဘယ်လိုနေမလဲ။ မင်းမှာဘာတွေပြောင်းနိုင်လဲ။ မင်းရဲ့အားသာချက်တွေကဘာတွေလဲ။ သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်အောင်ကူညီရန်မည်သည့်သင်တန်းများရရှိနိုင်ကြောင်းစဉ်းစားပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ရှင်များကသင့်ကိုမည်သို့မြင်ကြောင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှုမြင်နိုင်သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - Khost ရှိတိုက်ခိုက်မှုတွင်လူငါး ဦး သေဆုံး
အောက်တိုဘာလ 28, 2020 အောက်တိုဘာလ 28, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အနည်းဆုံးလူငါး ဦး သေဆုံးခဲ့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ Khost ပြည်နယ်ရှိရဲအထူးတပ်ဖွဲ့များအားအင်္ဂါနေ့နံနက်အစောပိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်သူနာပြုဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သူများစွာရှိသည်ဟုတာဝန်ရှိသူများကပြောကြားသည်။ နာရီပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်ခဲ့သောကားဗုံးနှင့်မီးသတ်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။
အောက်တိုဘာလ 25, 2020 အောက်တိုဘာလ 25, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
တာလီဘန်နှင့်အစိုးရအရာရှိများသည်ငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းပြောဆိုနေစဉ်၊ နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အရပ်သားကိုး ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ ၃၀ နီးပါးသေဆုံးပြီးအခြားသူများလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - ကားဗုံးသည်လူ ၁၅ ဦး သေဆုံး၍ ၅၀ ဒဏ်ရာရခဲ့သည်
အောက်တိုဘာလ 4, 2020 အောက်တိုဘာလ 4, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
Nangarhar ပြည်နယ်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံများအနီးတွင်ကားဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်းတွင် ၁၅ ဦး သေဆုံး ဒါဇင်နှင့်ချီသောသူနာပြုဒဏ်ရာများကျန်ခဲ့ Nangarhar ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Attaullah Khogyani ၏ပြောကြားချက်အရ Ghani Khel ခရိုင်ဌာနချုပ်အဆောက်အ ဦး ဝင်ပေါက်တွင်ကားဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများစတင်သည်နှင့်အမျှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုတောင်းဆိုပါ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 14, 2020 စက်တင်ဘာလ 14, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
ကာတာနိုင်ငံဒိုဟာတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ကိုယ်စားလှယ်များစုရုံးရောက်ရှိခြင်း စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတောင်းဆိုရန်ရှိသည့်နေရာတွင် တာလီဘန် နှင့်အာဖဂန်အစိုးရ။ အစိုးရညှိနှိုင်းသူများက၎င်းတို့သည်တိုင်းပြည်အတွင်းရေရှည်တည်တံ့သောအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုရည်ရွယ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 12, 2020 စက်တင်ဘာလ 12, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
ကြာမြင့်စွာစောင့်မျှော်ခဲ့ရသောငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ တာလီဘန် နှင့်အာဖဂန်အစိုးရ စနေနေ့မှာစမယ် စက်တင်ဘာလ 12, ၌တည်၏ ဒိုဟာကာတာ။ ကြာသပတေးနေ့ကကာတာနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနကကြေငြာခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲများသည်တိုင်းပြည်အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အာဏာခွဲဝေမှုသဘောတူညီချက်ရရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။
"မလိုအပ်သော" စစ်ပွဲများ၏ Trump ရဲ့အငြင်းအခုံဖြိုဖျက်
စက်တင်ဘာလ 7, 2020 စက်တင်ဘာလ 7, 2020 Samuel Gush	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump သည်အမေရိကသည်ဗီယက်နမ်၊ အီရတ်နှင့်အာဖဂန်နစ်စတန်တွင်အဘယ်ကြောင့်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့သနည်းဟုအကြိမ်ကြိမ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့သည်။ သမ္မတနှင့်နီးစပ်သောအတွင်းလူကထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုအသစ်အရ၎င်းကိုသမ္မတကပြောကြားခဲ့သည် ထင်ရှား အသစ်တခု CNN အစီရင်ခံစာတွင်။ စစ်ပွဲသုံးခုကိုမလိုအပ်သောသူအဖြစ်သူရှုမြင်ပုံရသည်။
ဂလိုဘယ် Going အွန်လိုင်း Gigs
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 28, 2020 သြဂုတ်လ 27, 2020 ဂျေးက Black	မှတ်ချက် Leave
ယနေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူ ၀ င်ငွေများဆက်လက်ရရှိခြင်း၊ သင်၏အိမ်အတွင်း၌မိမိကိုယ်ကိုဖန်တီးခြင်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ သင်၏ကလေးတွေအိမ်တွင် နေ၍ (သို့) သင်အလုပ်လုပ်သောအလုပ်ကိုပိတ်ထားလျှင်သင်၏ရွေးချယ်မှုအချို့ကားအဘယ်နည်း။ ဘောဂဗေဒပညာရှင်အများစုသည်ကမ္ဘာ့ပျံ့နှံ့ကူးစက်မှုမှလျင်မြန်စွာပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းကိုမမျှော်လင့်ကြပါ၊ အကြောင်းမှာခြောက်လခန့်ကြာပြီးဖြစ်သော COVID-19 နှင့်အနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - ၁၂ ယောက်သေဆုံး
သြဂုတ်လ 25, 2020 သြဂုတ်လ 25, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အနည်းဆုံးလူ ၁၀ ဦး သေဆုံးပြီးဒါဇင်ခန့်ဒဏ်ရာရခဲ့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလှိုင်း၌တည်၏။ အာဖဂန်ကွန်မန်ဒိုနှစ်ခုအပါအ ၀ င်လူသုံးယောက်သည်ဘော်လ်ပြည်နယ်ရှိထရပ်ကားတစ်စီးအသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ စစ်တပ်၏အစီရင်ခံချက်အရအခြားကွန်မန်ဒို ၆ ခုနှင့်အရပ်သား ၃၅ ဦး တို့သည်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် တာလီဘန်.
သြဂုတ်လ 22, 2020 သြဂုတ်လ 21, 2020 Artur Meyster	မှတ်ချက် Leave
လူအတော်များများကသူတို့ရဲ့အားလပ်ချိန်တွေကိုအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအနားယူချင်ကြတယ်။ တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၄၀ အလုပ်လုပ်ရသောအလုပ်မှအနားယူရန်သူတို့လုပ်ကြသည်။
အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်တွင်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်သင်၏အားလပ်ချိန်ကိုစွန့်လွှတ်ရန်စဉ်းစားသင့်သည်။ သင်အများစုသည်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အားကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူရန်အတွက်သင်ခွဲဝေချထားပေးနိုင်သည့်အချိန်ပိုပေးသည်။
သြဂုတ်လ 18, 2020 သြဂုတ်လ 18, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကဘူးလ်တွင် ၁၀၁ ခုကျင်းပပြီးနောက်မော်တာကျည်များကျရောက်ပြီးနောက်အနည်းဆုံး ၁၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်st လွတ်လပ်ရေးနေ့။ ပြည်ထဲရေး ၀ န်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Arian Tariq ၏အဆိုအရမော်တာကျည် ၁၄ လုံးသည်မော်တော်ယာဉ်နှစ်စီးမှပစ်ခတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီးမြို့တွင်းရှိလူနေအိမ်များကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
သြဂုတ်လ 18, 2020 သြဂုတ်လ 18, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏အဆိုအရ အာဖဂန်နစ်စတန်လွတ်လပ်ရေးနှစ် ၁၀၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည့်ကဘူးလ်တွင်ဒုံးကျည် ၁၄ စင်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရသည့်နေရာများထဲမှတစ်ခုမှာအာဖဂန်နစ္စတန်ရှိသမ္မတနန်းတော်ဖြစ်သည်။ ၀ န်ကြီးဌာနကဒုံးကျည်များသည်ကဘူးလ် ၈၊ ၁၇ ခရိုင် (ကာဘူ၏အနောက်မြောက်နှင့်အရှေ့ဘက်) ရှိယာဉ်နှစ်စီးမှပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်တာလီဘန်အကျဉ်းသား ၈၀ ကိုလွှတ်ပေး
သြဂုတ်လ 14, 2020 သြဂုတ်လ 14, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကြာသပတေးနေ့တွင်ကြေညာခဲ့သည် တာလီဘန်အကျဉ်းသား ၄၀၀ အနက် ၈၀ ကိုအစိုးရကအစ္စလာမ်မစ်အုပ်စု၏အန္တရာယ်ရှိသောအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့တာလီဘန်အကျဉ်းသားအားလုံးဟာပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်လည်စတင်သွားမယ်လို့ကောင်စီကရေးထားပါတယ်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - Loya Jirga တာလီဘန်အကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေးအတည်ပြု
သြဂုတ်လ 9, 2020 သြဂုတ်လ 9, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
တာလီဘန်နှင့်အာဖဂန်အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများသည်အာဖဂန်ခေါင်းဆောင်များအစည်းအဝေးပြီးနောက်မကြာမီစတင်မည်ဖြစ်သည် တာလီဘန်အကျဉ်းသား ၄၀၀ ကိုလွှတ်ပေးရန်သဘောတူ။ အကျဉ်းသားများကိုဆက်လက်ထောင်ချခြင်းသည်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပါတီနှစ်ခုအကြားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲအစပြုရန်ကြီးမားသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Loya Jirga တာလီဘန်အကျဉ်းသားများလွှတ်ပေးရေးအတည်ပြု
သြဂုတ်လ 8, 2020 သြဂုတ်လ 8, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ပထမအကြိမ်အီရန်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းအေဂျင်စီ (Iran Press) ၏အဆိုအရအာဖဂန်နစ္စတန်၏ Loya Jirga နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ယနေ့တွေ့ဆုံခြင်း တာလီဘန်အကျဉ်းသား ၄၀၀ ကိုလွှတ်ပေးရေးအတွက်မဲပေးခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီငါးခု၏အစီရင်ခံစာများတင်ပြပြီးနောက် Loya Jirga သည်ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ Jirga ၏နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုမနက်ဖြန်ကြေညာလိမ့်မည်။
Pompeo - Loya Jirga ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်“ သမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်း”
သြဂုတ်လ 7, 2020 သြဂုတ်လ 7, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Mike Pompeo ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်သည် အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိအတိုင်ပင်ခံ Loya Jirgaအာဖဂန်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများမစတင်မီတာလီဘန်အကျဉ်းသားများအားချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန်သူဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Pompeo ကသင်တန်းသားများကို“ ဒီသမိုင်းဝင်အခွင့်အလမ်းကိုယူပြီးအာဖဂန်လူမျိုးအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရယူပါ” ဟုတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
Gigs for Sale - သင်၏ Freelance Gigs ဝင်ငွေတိုးပွားစေရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 7, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2020 အလွတ်တန်း Global Gigs	မှတ်ချက် Leave
Gig ရောင်းချသူများလုံလောက်သောရောင်းအားရပါသလား Freelance Global Gigs (FGG) ဈေးနှုန်းချိုသာသောနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြေမရှိဟုထင်ကြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားခြားနားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းအကြောင်းကိုတစ်ခုခုလုပ်ရန်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးနည်းသောပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တင်သောဖျော်ဖြေပွဲများကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ကြိုးစားသည်။ ယခုတွင်သင်၏နာမကိုအမှီပြုရန်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဒီဂျစ်တယ်ဈေးကွက်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကွဲပြားသော ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုရှိသည်။
လွယ်ကူစွာ IP လိပ်စာများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အကောင်းဆုံး IP ခြေရာခံသူများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 7, 2020 သြဂုတ်လ 7, 2020 ရေဗက္ကာရော်ဂျာ	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာကြီးကိုပိုမိုသေးငယ်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်စေရန်အင်တာနက်သည်ရည်ရွယ်သည်။ မက်စ်ဝါ့တ်စ်အမှန်ပင်ကိုးကားခဲ့သည့်အတိုင်းဤမယုံနိုင်စရာကောင်းသောတီထွင်မှုသည်ဒီဂျစ်တယ်စနစ်သို့သွားသောခရီးကိုအစပြုခဲ့ပြီးပထဝီနယ်နိမိတ်များအပြင်အခြားကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိဆက်သွယ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် virtual ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်သစ်ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။
Coronavirus - ဥရောပမှာရောဂါကူးစက်မှုများမြင့်တက်လာခြင်း၊ ဌာနေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်သေဆုံး
သြဂုတ်လ 6, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ပြင်သစ်ကကြေငြာခဲ့သည် ပြီးခဲ့သည့် ၂၄ နာရီအတွင်း coronavirus ကူးစက်မှုအသစ် ၁၆၆၅ ကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နှစ်လအတွင်းနေ့စဉ်အများဆုံးကူးစက်မှုဖြစ်လာသည်။ COVID-19 သည်ပြင်သစ်တွင်လူပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဗြိတိန်နှင့်အီတလီပြီးလျှင်ဥရောပတွင်တတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းမန်နေဂျာများအတွက် software developer - ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်
သြဂုတ်လ 6, 2020 သြဂုတ်လ 6, 2020 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်	မှတ်ချက် Leave
ထိပ်ဆုံးမှကြည့်လျှင်အောင်မြင်သော Software Developer ဖြစ်လာရန်လိုအပ်သောစွမ်းရည်များသည် Project Manager အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။ သို့သော်သတိပြုသင့်သည်မှာသတိပြုသင့်သည်မှာဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းခရီးစဉ်သည်သူသို့မဟုတ်သူမသည် IT စီမံကိန်းများကိုဂရုစိုက်ရမည့်နေရာတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် software developer တိုင်းသည် software developer ၏အခန်းကဏ္ project မှစီမံကိန်းမန်နေဂျာများသို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မည်။
အာဖဂန်နစ္စတန်အကျဉ်းထောင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် ISIS အဖွဲ့ ၃၆ ဦး သေဆုံး \_ t
သြဂုတ်လ 4, 2020 သြဂုတ်လ 4, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော်၏အဓိကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ ၃၆ ဦး သေဆုံးခဲ့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်းရှိအကျဉ်းထောင်တခုတွင်အကြမ်းဖက်သမားများ။ Jalalabad မြို့တော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလူ ၅၀ လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ် Nangarhar ပြည်နယ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံး၌သင်တို့၏“ ပွဲများရောင်းခြင်း” ကိုသင်တို့ကူညီနိုင်မည်လော။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick သြဂုတ်လ 2, 2020 သြဂုတ်လ 2, 2020 အလွတ်တန်း Global Gigs	မှတ်ချက် Leave
Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း ယခုအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ပတ်သက်သည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုထုတ်ဝေလျက်ရှိပြီးနိုင်ငံအားလုံးနီးပါးတွင်တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ထုတ်လွှင့်သည့်သတင်းများ - နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံချင်းစီနှင့်အဓိကမြို့တော်အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဒေသဆိုင်ရာအော်ဂဲနစ်ဘာသာစကားများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။
ဂါနီ - တာလီဘန်အကျဉ်းသား ၄၀၀ ကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်
သြဂုတ်လ 1, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်သမ္မတ Ashraf Ghani ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် ကျန်ရှိနေသေးသောတာလီဘန်အကျဉ်းသား ၄၀၀ ကိုသူလွှတ်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ Ghani ကမူသူတို့၌လွှတ်ပေးရန်အခွင့်အာဏာမရှိကြောင်း၊ သူကရိုးရာအကြီးအကဲကောင်စီနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပြီးရှေ့သို့သွားမည့်လမ်းကိုဆွေးနွေးရန်ပြောကြားခဲ့သည်။ အကြီးအကဲများနှင့်တွေ့ဆုံမှုသည်အချိန်များစွာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများကိုနောက်ကျသွားစေသည်။
ဇူလိုင်လ 29, 2020 ဇူလိုင်လ 29, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါ တာလီဘန် ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် Eid ul Adha အားလပ်ရက်အတွက်အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ဒီတနင်္ဂနွေကစတင်ခဲ့သည် အဖွဲ့၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Zabiullah Mujahed ၏အဆိုအရတပ်မှူးများအားသတ်မှတ်ထားသောနေ့ရက်များအတွက်စစ်ဆင်ရေးများရပ်ဆိုင်းရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 29, 2020 ဇူလိုင်လ 28, 2020 Walter Richards	မှတ်ချက် Leave
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုလည်း anti-malware, ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ် (virus virus) ဟုလည်းရည်ညွှန်းပြီး၊ ၎င်းတို့ကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်ခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၊ နောက်ခံစောင့်တပ်ဖွဲ့၊ နေထိုင်သူဒိုင်းလွှား၊ အလိုအလျောက်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်အခြားဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ စပိုင်ဝဲနှိမ်နင်းရေးနှင့်အခြား anti-malware ပရိုဂရမ်များမှအလိုအလျောက်ကာကွယ်မှုမှတောင်းဆိုသောအခြား synonyms များအတွက်အသုံးပြုသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်မည့်ထိပ်ဆုံး SEO မဟာဗျူဟာ ၁၀ ခု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 27, 2020 ဇူလိုင်လ 25, 2020 Uzair Ahmed	1 မှတ်ချက်
အော်ဂဲနစ် ၀ က်ဘ်အသွားအလာပိုမိုရရှိရန်အတွက် SEO ဆိုသည်မှာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း၊ အဆင့်မြင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ပုံစံအသစ်များမှအသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စနစ်များကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ကိရိယာများသည် SEO တိုးတက်မှုမှစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုရှိသော်လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နေရာများစွာအမြဲရှိနေသည်။
Crypto ၏တည်ငြိမ်မှု - စာသား!
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 26, 2020 ဇူလိုင်လ 26, 2020 ဂျူလီမစ်	မှတ်ချက် Leave
၂၀၀၉ ခုနှစ်သည်အတော်အတန်နီးကပ်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များမှထင်ရသော်လည်းနည်းပညာနယ်ပယ်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ၂၀၀၉ သည်အလွန်ဝေးကွာသည်ဟူသောမေးခွန်းမရှိပါ။ စမတ်ဖုန်းတွေဟာစျေးကွက်ထဲမှာစပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးစတင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ Uber ဟာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာစတင်တည်ထောင်ခါစပဲရှိသေးသည်။ cryptocurrency နှင့် blockchain နည်းပညာနယ်ပယ်သည်ကျွမ်းကျင်မှု၊ လက်ခံမှုနှင့်ဆီလျော်မှုတို့အတွက်ခုန်ကျော်လွှားနိုင်သောနယ်ပယ်များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
10 ခုနှစ်တွင်ထိပ်တန်း 2020 Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 24, 2020 ဇူလိုင်လ 26, 2020 Ronon Margo	မှတ်ချက် Leave
Etherum သည် crypto ကမ္ဘာတွင်ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အခြေခံအဆောက်အအုံကြောင့်ဖြစ်သည်။ Etherum ပိုက်ဆံအိတ်သည်သီးခြားဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောပလက်ဖောင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည် blockchain နည်းပညာဖြင့်လုံခြုံသည်။ Bitcoin စျေးနှုန်းများသည်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှလူများသည် Ethereum ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရန်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ထိပ်ဆုံး Etherum ပိုက်ဆံအိတ် ၁၀ ခုအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့။
ဇူလိုင်လ 19, 2020 ဇူလိုင်လ 19, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အဆိုပါ တာလီဘန် စေပြီ အာဖဂန်ခေါင်းဆောင်များနှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမတိုင်မီ၎င်း၏ခေါင်းဆောင်မှုသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုများကို။ Mullah Mohammad Yaqoob ကိုစစ်တပ်၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာတာလီဘန်များရဲ့ကြောက်စိတ်အရှိဆုံးတည်ထောင်သူရဲ့သားဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင် ၂၀ ပါဝင်သောညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့သို့အခြားအဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး ကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
၆။ Freelance Global Gigs တွင်ဖျော်ဖြေတင်သွင်းခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများဈေးနှုန်းချိုသာသည့်စျေးကွက် - ဘယ်တော့မျှလွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ!
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 17, 2020 ဇူလိုင်လ 25, 2020 အလွတ်တန်း Global Gigs	မှတ်ချက် Leave
At Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း မင်းကိုမင်းတို့လိုချင်တယ် မင်းရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုရောင်းပါ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့လျှော့အလွတ်တန်းပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်လွယ်ကူသောလုပ်လေ၏ မင်းရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေကိုရောင်းပါ။ သင်ပြောသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုသွားပါ Gigs ရောင်းပါ ဤသူသည်ရောင်းသူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်သင့်အားစာမျက်နှာသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သင်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစာရင်းပြုစုရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထို့ကြောင့်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာသော်ကုန်ကျစရိတ်လည်းမရှိပါ။
ပါကစ္စတန်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်လေး ဦး သေဆုံး
ဇူလိုင်လ 16, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အနည်းဆုံးလူလေး ဦး သေဆုံးပြီးကိုး ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် ပါကစ္စတန်မှပစ်ခတ်သောအမြောက်ကျည်အချို့ အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်းရှိနယ်စပ်ရှိရွာတစ်ရွာအားစစ်တပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ပါကစ္စတန်အာဏာပိုင်များကတစ်ရက်အစောပိုင်းကအာဖဂန်တပ်ဖွဲ့များအားတိုက်ခိုက်မှုအားစတင်တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - တာလီဘန်တိုက်ခိုက်မှု ၁၁ ဦး သေဆုံး
ဇူလိုင်လ 15, 2020 ဇူလိုင်လ 15, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီအနည်းဆုံး ၁၁ ဦး သေဆုံးပြီး တာလီဘန် အာဖဂန်နစ္စတန်မြောက်ပိုင်းရှိထောက်လှမ်းရေးခြံတစ်ခုတွင်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ စွပ်စွဲချက်အရကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေဗုံးခွဲသူသည်ခြံဝင်းအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးနောက်တွင်မီးဖွင့်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်အသတ်ခံခဲ့ကြသောစစ်သည်နှစ် ဦး လိုက်ပါခဲ့သည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - တာလီဘန်များ၏တိုက်ခိုက်မှုသည် Kunduz တွင်ဒဏ်ရာရသူ ၅၀ ဖြစ်သည်
ဇူလိုင်လ 13, 2020 ဇူလိုင်လ 13, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၄ ယောက်သေဆုံးခဲ့သည် တာလီဘန်စစ်သွေးကြွများ၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်ရဲစစ်ဆေးရေးဂိတ်များကိုတိုက်ခိုက်မှုတွင် Kunduz ပြည်နယ်။ ထို့အပြင်မြောက်ပိုင်းရှိ Samangan ပြည်နယ်၏မြို့တော် Aibak တွင်ဗုံးခွဲမှုကြောင့်လူ ၅၀ ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် အာဖဂန်နစ္စတန်တနင်္လာနေ့သတင်းများအရသိရသည်။
အာဖဂန်နစ္စတန် - လမ်းဘေးဗုံးခြောက်ကောင်သေဆုံး
ဇူလိုင်လ 12, 2020 ဇူလိုင်လ 12, 2020 Juliet Norah	မှတ်ချက် Leave
အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်း၊ ဂျဂတ်တောင်းခရိုင်တွင်လမ်းဘေးဗုံးတစ်လုံးကြောင့်အနည်းဆုံးလူ ၆ ယောက်သေဆုံးခဲ့သည်။ ယာဉ်တွင်ခရီးသွားနေသောအရာရှိတစ် ဦး ကအဖြစ်အပျက်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ Ghazni ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Wahidullah Jamazada ကအဆိုပါဖြစ်ရပ်တွင်လူရှစ် ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလက်ပ်တော့တစ်လုံး ၀ ယ်တဲ့အခါဘာကိုရှာရမလဲ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 12, 2020 ဇူလိုင်လ 30, 2020 Sunil Kumar က	မှတ်ချက် Leave
Business laptop သည်လုပ်ငန်းပမာဏပိုမိုလေးလံခြင်းနှင့်ကြာရှည်စွာအသုံးပြုခြင်းကိုသည်းခံနိုင်ရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောကွန်ပျူတာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ ၎င်းတို့သည်ပိုမိုအားကောင်းသော၊ ပိုမိုပေါ့ပါးသော၊ တည်ဆောက်မှုပိုမိုဆိုးရွားသည့်အချိန်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများအတွက် ပိုမို၍ အကျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှအချို့သည်ပုံမှန်ထက်ပိုမိုလုံခြုံပြီးပိုမိုပြင်းထန်သည် လက်တော့ပ် ဘာလို့လဲဆိုတော့စီးပွားရေးလက်တော့ပ်တစ်ခုမှာပိုပြီးလျှို့ဝှက်ဖိုင်တွေရှိပြီးလွယ်လွယ်ကူကူချိုးဖောက်လို့မရပါဘူး။
COVID-19 အချိန်တွင် SEO သည်အဘယ်ကြောင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 10, 2020 ဇူလိုင်လ 29, 2020 Abby Drexler	မှတ်ချက် Leave
အင်တာနက်၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်မှာစီးပွားရေးအတွက်အမြဲဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နေအိမ် - အိမ်တွင်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပိတ်ခြင်းများမည်သို့ပင်ရှိနေပါစေ၊ လူများသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ၀ က်ဘ်၏ကျေးဇူးကြောင့်သတင်းအချက်အလက်၊ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အခြားလိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကို ၀ ယ်ယူနိုင်ခဲ့သည်။ ဝင်ငွေဒေါ်လာ; သဘာဝတုံ့ပြန်မှုမှာလက်ရှိဘတ်ဂျက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်နိုင်သည် SEO ဆိုသည်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဗျူဟာသည် COVID-19 ကာလအတွင်းယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။
12...4ပို့စ်အဟောင်းများ